DAAWO:Gudidda Baadhista Xasuuqa Oo Gabiley Ka Helay Laba Xabaal- Wadareed, iyo nin ka sheekeey dhacdo xanuun badan. |
DAAWO:Gudidda Baadhista Xasuuqa Oo Gabiley Ka Helay Laba Xabaal- Wadareed, iyo nin ka sheekeey dhacdo xanuun badan.
Gabiley (GNN): Guddida baadhista xasuuqa ee Somaliland ayaa soo bandhigay laba xabaal- wadareed oo ay ka heleen magaagalada Gabiley, kuwaas oo mid ahaan ay ku bilaabayaan baadhitaan la xidhiidha qaabkii loo xasuuqay dadka halkaasi lagu aasay.
Goobka ay gudidu ka heleen xabaal-wadareedyadani ayaa waxaa joobjoog ka ahaa Gudoomiyaha gudiga baadhista xasuuqa Somaliland, wasiir ku xigeenka wasaarada diinta iyo awqaafta, gudoomiayah komishanka xuquul insaanka Somaliland, badhasaab xigeenka gobalka Gabiley iyo qaarabada dadkaasi goobtaas lagu laayay.
Gudoomiyaha gudiga baadhista xasuuqa Somaliland Khadar Axmed Like, ayaa faahfaahin ka bixiyay qubuurahan cusub ee ay heleen iyo wakhtigii dadkaasi halkaa lagu aasay. Waxaanu yidhi “Waxaan soo bandhigaynaa isla markaana baadhitaano ku samaynaynaa laba xabaalo-wadareed oo lagu laayay dad badan oo aan waxba galabsan uu laayay Col. Tuke, oo wakhtigaas halkan ka talinayay, mid ka mid ah labadaas xabaalood ayaanu furidoonaa baadhitaana aanu ku samayndoonaa.
Waxaan u mahadnaqeynaa nimankan bilaashka inoogu shaqeynaya ee inala raadinaya howsheenii sidii aanu u daba gali lahayn oo lagu magacaabo Peru. Waxa kaloon mahad mudan Cabdicasiis Maxamed Iid oo ah ninka inoo soo shukaamiyay hayadan sida tabaruca inoo la shaqeynaysa”.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Nuur Cismaan Guuleed, oo isna munaasibadaasi lagu furayay xabaalo-wadareedyada, waxaanu tilmaamay in dadkaasi ay laayeen gacan ka gardaran.
Waxaanu yidhi “Waxaan Alle u waydiina dadkan naxariistiisa siiyo, dadkani su’aalo badan ayaa yaala oo maxaa lagu dilay, maxaa lagu laayay dad inta la ururiyo oo la laayo, dad Islaama ayaynu nahay.
Islaamku waad og tihiin rabina inoo sheegay in qofka qof dila uu lamid yahay sidii mid dadka oo dhan laayay, qofkii naf nooleeyana uu lamid yahay mid naffo badan nooleeyay quraankeena ayay ku qaran tahay. Cidii dambigan waxashnimada ah gashay waa in la raadiyo sidii loo nheli lahaa loo howl galo dee lagana abaalmariyo inta uu dunida jooga kolay Alle kama baxayo halkiisa ayay u taalaa”.
Sidoo kale Gudoomiyaha komishanka xuquuqul insaanka Somaliland Farxiya Xuseen Jaahuur, oo iyadna halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay inay cambaarenayaan falkaasi bahalnimada ah ee lagu dad aan waxba galabsan islamarkaana ay la tiigsanayaan gacan ku dhiiglayaasha geystay sharciga.
waxaanay tidhi “Runtii waa tiiraanyo weyn weeyaan in maanta (shalay) joogno xabaalo ka mid ah xabaalihii dadka lagu xasuuqay, dadkaasina ay u dhinteen xaqoodii ama fikiradii ay aamin sanaayeen dadkaasi xaqoodii iyo noloshoodiiba ay ku waayeen aad ayaanu ugu xunahay komishanka xuquuqal-insaanka.
Waxaan cadeynayaa inaan ku garab taagan nahay gudida baadhitaanka xasuuqa ee baadhaya dhibatooyinkii laynoo gaystay oo illaa hada oo laga joogo 23 sano aynu wali wadno in maalinkasta in geeri cusub iyo tiiraanyo hor leh ay nala soo daristo.
Waxaan cambaareynayaa cid kasta oo falkaa bahalnimada ah geysatay haday tahay komishan iyo haday tahay dowladaba kama hadhi doonto cidii ka dambaysay”.
Badhasaabka ku xigeenka gobalka Gabiley Cali Cabdi C/laahi (Cali-case) ayaa dhankiisa ka hadalay mudadii dadkan rayidka ah la xasuuqay iyo waliba cidii ka damabay waxaanu yidhi, “Labadan xabaalo-wadareed oo ay ku aasan yihiin ugu yaraan 21 qof, gobalkan Gabiley waxa uu ka mid ahaa meelaha xasuuqa ugu darani ka dhacay maadama uu halkan ka dhawaa halganku, dadka halka lagu xasuuqay waxay ka mid ahayeen dadkii dambi la’aanta ahaa ama aan waxba kala socon ee la odhan jirey raad baa ku dulmarey ayaa lagu soo ururiyay iyagoo xoolahooda iyo reerahoda jooga sidaas ayaa lagu layn jirey.
Gacan ku dhiiglayaashii falkaa geystana meelkasta oo ay jogaan waa ladaba socdaa waana la qabdoonaa. Taariikhda dadkan la laayay waxay ahayd 1987 waxaana wakhtigaas halkan haystay Col% Tuke dadka falkaa fuliayay ayuu madax u ahaa”.
Mr. Franco Ban oo hogaaminayay kooxdan khubaradda ah ayaa dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay inay dowlada iyo gudida baadhista xasuuqa ay kala shaqeeyaan baadhitaano lagu sameeyo cidii ka dambaysay.
Waxaanu timaamay in baadhitaanadan xasuuqa lagu ogaanayo cidii gaysatay amaba ay cadeyn u noqonayso. Mr. Franco waxaa kale xukuumada Somaliland ku bogaadiyay dhiirashada ay ku dhiiratay inay bilowdo baadhitaanada xasuuqa ee lagula kacay isagoo tilmaamay inay tahay dowladii ugu horey ee howshan oo kale fulisa marka laga reebo Koonfur Afrika.